Qasaaraha ka dhashay fatahaada Wabiga Shabelle oo kordhaya
Xiriiriyaha dhinaca samafalka ee Maamulka dowladda ee gobolka Hiiraan iyo Hayadaha samafalka Keynaan-diid Muumin Cali oo la hadlay Warlalis ayaa waxa uu ka warbixiyay inta uu la egyaha qasaaraha ka dhashay fatahadii Wabiga Shabelle ee magaalada Baledweyne.
Keynaan-diid Muumin Cali ayaa waxa uu sheegay in dhimashada dadka ee uu sababay fatahaada Wabiga ay marayso 55 ruux sidoo kalana waxa uu xusay inay ku dhinteen in ka badan dadka oo ah xoolihii ay dhaqanayeen.
Dadka ayaa waxa uu sheegay inay isugu jireen kuwa si kadis marka uu wabiga ugu soo fatahay gaariyooday iyo sidoo kale dad aan dabaasha aqoon oo biyaha wabiga uu sidaasi kula tagay. Isaga oo sheegay in iyaga oo kaashanaya ciidamada AMISOM ee jabuuti ay samata bixiyeen qaar badan oo dadka ka mid ah
Xiriiriyaha dhinaca samafalka ee Maamulka dowladda ee gobolka Hiiraan iyo Hayadaha samafalka ayaa sheegay Qasaaraha uu intaasi ka badan yahay oo ay jiraan guryo badan oo dadka ay qaadeen sidoo kalana waxa uu carabka ku dhuftay inay magaalada ka qaxeen kumanaan ruux kuwaasi oo uu sheegay in ceyr yihiin oo aysan jirin wax ay haystaan.
Keynaan-diid Muumin Cali ayaa waxa uu ugu baaqay dowladda Soomaaliya iyo Hayadaha samafalka inay lasoo gaaraan dadkaasi uu saameeyay fatahaada wabiga Shabelle gargaar degdeg ah hadii kalana ay naf baxayaan.
Fatahaada Wabiga Shabelle ayaa waxa uu ahaa mid kadis ku noqday dadka, iyadoo fatahaada Wabiga uu ka dhashay roobaab in ka badan 10 saacadood ka daay magaalada taasi oo keentay in wabiga uu buux dhaafo kadibna uu fataho.